point ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » point ???
Posted by စစ်ကဲ on Jun 15, 2012 in Other - Non Channelized | 61 comments
ဒီဆိုက်မှာ ကော်မန့်ရေးချင်လို့ မန်ဘာ စာရင်းသွင်းလိုက်တာပါ။
အဲဒီမှာ စတွေ့တော့တာဘဲ၊ your point : 5000 kyats ဆိုတာဘဲ။
ဒါနဲ့ဘဲ point ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ လိုက်ရှာကြည့်တော့ ကျွန်တော်ကဘဲ ပိန်းလို့လားမသိဘူး၊ ရှာလို့မတွေ့ဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီပိုစ့် ကို တင်လိုက်ရတာပါ။ နဲနဲလောက်ရှင်းပြပေးကြပါလား။
Myo Min Oo has written3post in this Website..
View all posts by စစ်ကဲ →
your point : 5000 kyats ဟုတ်လား
ပွိုင့်ဆိုတာ မန်းတလေးဂေဇက် မှာ ဆိုက်ပိုက်ရှင် သဂျီးက သတ်မှတ်ပေးတဲ့ ဖွတ်ဒင်္ဂါး ။ တစ်သိန်းပြည့်ရင် ထုတ်ပေးမယ်တဲ့ ။ တစ်ကယ်လဲ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ အရင် ပြည့်ခဲ့တဲ့လူတွေကို ။ ပို့ စ်တစ်ခုတင်ရင် ၃၀ လားမသိဘူး ။ ကွန်မင့်တစ်ခု ကိုတော့ တစ်ဆယ် ဘဲ ။
အခု တစ်ဆယ်ယူပြီး လစ်ဘီ
ဟဲ့ ပြောင်ကြီးရဲ့ ၆ ကျပ်ဖြစ်သွားပြီ
လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုပိုပြောင်လာပြီ နဖူးပြောတာပါ
အာ .. တစ်ဆယ်ပါဆိုမှ မနေ့ကလည်း ကိုအမတ်မင်းရှင်းပြသေးတဲ့ဟာပဲကို
ပြန်လည်းမကြည့်ဘူး .. အဟိ
အနေဝေးလို့ ကိုဖရဲကို စိမ်းကားတာလား
ဟိုက ကျုပ်ကို တသက်လုံး ဘီဘီ တိုက်မယ် ပြောပီးတွားဘီ..
သိပ်နောက်ကျသွားဘီ မောင်လေးဖျဲ ရေ…..
ကိုကိုကြောင်ကိုလည်း သဒင်းဆိုး ပါးလိုက်ပါဦးကွယ်…
အေးလေ ဘုမသိဘမသိနဲ. တစ်ဆယ်ယူပြေးတယ်… သကြီးပြောင်းထားတာ မသိဘူးလား ပြန်ပေး လေးကျပ် ဟားဟားဟား………….
လစ်ဘရယ် သဂျီးလည်း ဒစ်စခွင်မီနိတ် လုပ်တာပါပဲ ….
နိုင်ဂျံဂါးကနေရေးရင် တပြားမှ မပေးဝူးတဲ့ ..၁သိန်းပြည့်ရင် အော်တိုငုတ်တုတ်
ဇီးဒိုး ဆက်တင် ပြန်ချမှာ …
၉သောင်း ကျော်လို့ ပလက်တီနမ် မန်ဘာဖြစ်မှ ရပ်ပစ်လိုက်မယ် စိတ်ကူးဒယ်…
လာထား ..လေဒဲက ၁၀
အူးလေး အချစ်နဲ့စစ်မှာ မတရားသာ မရှိဘူး
အခုလို ၀င်ပြောလိုက်ရင် ညာဘက်အခြမ်းက အပေါ်ဆုံးဒေါင့်က My Points အောက်မှာ တစ်ဆယ် တက်သွားတမြင်ရပါလိမ့်မယ်
သေချာလဲမပြောပြကြဘဲ ၁၀ ၁၀ ယူပြီးလစ်သွားကြတယ်၊ တစ်ယောက်ကလဲ ၆ ကျပ်တဲ့၊
လင့် လေးဖြစ်ဖြစ်ပေးကြပါလား၊ ကိုယ့်ဘာသာဘဲဖတ်တော့မယ်။
သဂျီး အိတ်ပိန် …. ၄ ကျပ်ဂိန် ..
သဂျီး အိပ်ဖောင်း … စိတ်ကပြောင်းး….
အမှန်တကယ် ..တစ်ဆယ် ဖြစ်ပြန် ..
သိချင်မှတ်ထား….. Rule ကိုသွား…
ညာဘက်ကော်လံမှာ ရှိတဲ့ ……
လေးတွေကို သွားဖတ်ပြီး ပွိုင့်တွေရော … ဘာတွေရော အကုန်သိလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် …. ။
ကြိုဆိုပါတယ် ရွာသားသစ်လေးရေ ။
အဲဒီ ဟာတွေအကုန်ဖတ်ပြီးပြီ၊ ပွိုင့်အကြောင်းမပါဘူး၊ ကျွန်တော်ပြောတာ ပွိုင့်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေဘာတွေရှိလားလို့ပါ။ အဟာကြောင့်မေးတာပေ့ါ။
ပွိုင့်ဆိုတာ နေကြာစေ့ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်ဗျ
ကိုမျိုးမင်းဥူး ရေ ပွိုင့် အသုံးဝင်လားမ၀င်လားတော့မသိ ဘူး အစ်ကို ပွိုင့် တစ်သိန်း ရရင် သကြီးဆီကနေ ပိုက်ဆံတသိန်းကို တကယ်လက်ခံရရှိမှာပါ…… ဒါက ပွိုင့်ရဲ. အသုံးဝင်ပုံပါ..အစ်ကိုပို.စ်တွေများ ကော့မန်.တွေများလေ ပွိုင့်ပိုရလေ… ရေးလေးရလေ ရလေရေးလေ နဲ. တစ်သိန်းပြည့်ရင် သကြီးဆီက ပိုက်ပိုက် ထုတ်ပြီး ကဲယုံပေါ့ဗျာ……….
ဟူးမောတာ………တစ်သိန်းပြည့်ရင် ဘီယာတိုက်ဒါပဲ…………. B-)
ဒီမှာမန်ဘာဝင်ရင် မြန်မာငွေနဲ့ ၅၀၀၀ကျပ်စပေးတယ်
ဒီစာမျက်နှာရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ဆုံးမှာ my point ဆိုတာတွေ့တယ်ဟုတ်
အခုခင်ဗျားပို့စ်တင်တော့ ၃၀ ထင်တယ် ထပ်တိုးတယ်
ကွန်မန့်တစ်ခုဆိုတော့ ၅၀၄၀ ရပြီထင်တယ်
သူများတွေက ခင်ဗျားပို့စ်မှာဝင်မန့်ရင် ပို့စ်ပိုင်ရှင်က ၂ ကျပ်ရတယ်
တစ်သိန်းပြည့်ရင် သဂျီးက ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိမ့်မယ် ဒါဗြဲ ..
ကျုပ်က ၂ခါမန့်ပေမယ့် ထပ်မရတော့ဘူး ရော့၂ကျပ်ထပ်ယူလိုက်
ကျေးဇူးဘဲ ကိုမိုးစက်ရေ၊ ရှင်းသွားပြီ၊ ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ် ဘယ်လောက်ကို ဘယ်လိုရလဲဆိုတာပေါ့
ပိုစ့်တစ်ခုတင်ရင် ၃၀ ရတယ်၊ တခြားရွာသားတွေက ကော်မန့်လာပေးရင် ပိုစ့်ပိုင်ရှင်က ၂ ရတယ် ကိုယ်တင်တဲ့ပိုစ့်ကို ကိုယ်က ကော်မန့်ပြန်ရေးရင်လည်း ၁၀ ရတယ်၊ နောက်ထပ်ရေးတဲ့ ဟာတွေအတွက်က ဘာမှမရတော့ဘူး၊ ရေးတဲ့ရွာသားအနေနဲ့ရော ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရွာသားအနေနဲ့ရော၊ ဘာဆိုဘာမှမရတော့ဘူး။
ရော့ဗျာ ကိုရင်မျိုးမင်း ၂ ကျပ်ထပ်ယူလိုက်
ခင်ဗျားလုပ်မှပဲ သဂျီးက ကျုပ်တို့ ဂေဇက်အဖွဲ့ဝင်တွေကို အစိုးရမိုဘိုင်းဖုန်းချပေးသလိုလုပ်တာပေါ်တော့တယ်…
ကျုပ်ဖြင့် ၈၀၀၀ တောင်မကျော်သေးဘူးရယ်…
သူတို့ စစချင်း ၅၀၀၀ ရသေးတယ်။
ဒို့များတော့ ၈၀၀ ခေတ်က လား မသိပေါင်အေ…
ဆူးရေ တို့တွေလည်း ခုမှ မန်ဘာပြန်ဝင်ရမလားမပြောတတ်ဘူး။ တို့ခေတ်ကများ တစ်နေ့ကို လော့အင်ဝင်တာ ၂၀ ကျပ်၊ ရီချက်စတာလုပ်တာ ၄၀၀ လား မပြောတတ်။ ကော့မန့်ကျတော့ ၅၀ ကျပ် စာမူရေးရင် ၂၀၀ အရမ်းကောင်းရင် ၅၀၀ ထိတိုးပေး၊ ဂလို ဂလိုတွေခေတ်ကိုး ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်းမှာ မန်ဘာဟောင်းတွေအတွက် ပွိုင့်တွေ တိုးပေးဖို့ကော အစီအစဉ်ရှိပါသလား သဂျီးရှင့်…
မနောရေ့….။ တို့လည်း သူကြီးကို ဖယောင်းတိုင်ထွန်းရအောင်……. ပွိုင့်ပေးအောင် …… ဟီးးးးး
သဂျီးကို သံပြားပေါ်တင်ပြီး အောက်တည့်တည့်ကနေ ၀ိုင်း ဖယောင်းတိုင် ထွန်းပြီး ဆုတောင်းပေးတာ ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။ အချုပ်အချာ အာဏာ တည်မြဲစေဖို့ ပူဇော်ပသဖို့တော့ လိုတယ်။ အဟိ။
ငါလဲ အခုမှ ပွိုင့်အကြောင်းသိရတော့တယ် မေးပေးတဲ့ ကိုမျိုးမင်းဦး ကိုရော သေချာပြန်ဖြေပေးတဲ့ ကိုမိုးဇက်ကို ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ….. ပွိုင့်အကြောင်းကိုလဲ စတစ်ကီ နုတ်ထဲမှာ ထပ်ထဲ့ထားစေချင်ပါတယ်……. လာထား၁၀ ယူသွားပြီကွယ်
ခင်ဗျားက နိုင်ဂျံဂါးမှာဆိုရင်တော့ အဲဒါ ကိန်းဂဏန်းတွေလို့ပဲမှတ်
တစ်ချို့ကတော့ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းနဲ့ သားသမီးတွေကို password အမွေပေးခဲ့မယ့်သူတွေရှိတယ်
စိတ်ထဲတော့ တစ်ခု ထင့်နေတယ်.. မိုးကလေးက ရွာသားအသစ်တွေကို
ိသူ… သိပ်များ အရေးပေးနေသလိုပဲ။ သိပါဘူး…
ဒီက အတ္တကြီးတော့ ကြံဖန် သ၀န်တိုနေတာများလာတောင် မသိပါဖူး..
မိုးလေးရယ်.. အသစ်တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း
အဟောင်းက အရမ်းကောင်းနေလျက်ပါ…. နော့..
အဟီး.. တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်…
၁၀လည်းရ… သ၀န်တိုနေတာလည်း ပြောလို့ရ… ;) ;)
နွယ်ပင်တို့ ဝင်တုန်းက 500 ပဲလားမသိဘူးရတာ
အခု 5000 ဆိုတော့ ….. အခုလောလောဆယ်တော့ 10 ယူသွားပြီ
အောင်မယ်လေးသဂျီးရက်စက်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။ အသစ်ကိုပဲမျက်နှာလိုက်ပါတယ်ဆို။ ကျွန်မ တို့တုန်းက မန်ဘာဝင်တာ ၃၀၀ ပဲရတယ်။ တလောလေးကကြားတာ ၄၀၀၀ တဲ့။ အခု ၅၀၀၀ တဲ့။ ကျွန်မ တို့နစ်နာသူတွေကိုရော ၄၇၀၀ ထပ်တိုးပေးမှာလားသဂျီးရေ။ ဆူးလေဘုရားရှေ့မှာ ၅၀၀၀ တန် ကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြ ရမလိုဖြစ်နေပြီ။ မန်ဘာအားလုံးသာတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိရေးဆိုပီး။
ရခဲ့မယ်ဆိုလဲ ၁၀၀၀ မပြည့်တာသေချာပါ….
နောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့် ဘယ်လောက်တိုးလာတယ်. ဆိုတာလေး.
အနော်လည်း မနေ.ကမှ ၀င်တာ စစချင်း ၅၀၀၀ ပေးထားတယ်။
၃ ခါမန့် ပြီးပြီ။ ဒါနဲ့ဆို ၄ခါ။
အလဲ မနေ.ကမှစ၀င်တာဆိုပဲ……. လာထားတစ်ဆယ်က လုပ်ထားသေးးးးးးးးးး ဟေးဟေးဟေး
လာထား 10 ရော ၂ကျပ် ကဲဟာ ၆ကျပ် သွားအိပ်ထဲ ဟဲဟဲဟဲ
အဲ မရှင်းတာ တစ်ခုမေးအုံးမယ်..
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ကိုယ့်ပိုစ့်ကိုကိုယ်တိုင် Comment တစ်ခုထက်ပိုပီး Reply ပြန်လုပ်ရင် ၂ ကျပ်က နှုတ်တာပဲ လား ..
ဒါမမဟုတ် အပြည့်ရတာလား သိချင်ပါသည်
ပိုစ့်တစ်ခုတင်ရင် ၃၀ ရတယ်၊ တခြားရွာသားတွေက ကော်မန့်လာပေးရင် ပိုစ့်ပိုင်ရှင်က ၂ ကျပ် ရတယ် ကိုယ်တင်တဲ့ပိုစ့်ကို ကိုယ်က ကော်မန့်ပြန်ရေးရင်လည်း ၁၀ ရတယ်၊ နောက်ထပ်ရေးတဲ့ ဟာတွေအတွက်က(ကိုယ့်ပိုစ့် ကို ကိုယ်တိုင် comment တစ်ခုထက်ပိုပြီး reply လုပ်ရင်) ဘာမှမရတော့ဘူး၊ ရေးတဲ့ရွာသားအနေနဲ့ရော ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရွာသားအနေနဲ့ရော၊ ဘာဆိုဘာမှမရတော့ဘူး။ ၂ကျပ်လဲ မနှုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လေ့လားပြီးပြီ။
အနော် ၁ သိန်း ပြည့်ရင်လဲ ဘီယာတိုက်မှာပါဗျ…
ဟွန့်… မွန်ကစ် တို့တော့ တစ်သ်ိန်းမပြည့်ခင် ပြန်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်…
မနောဖြူလေးပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်ချင့် …. လာထား .. အာဟိ
သူကြီးရေ … အနော်တို့တုန်းက 4000 နော်… အခု 5000 ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေး …ဒါဗြဲ …. လာထား 10
ဒုက္ခပါဘဲ သူကြီးတော့ စိတ်ဆိုးတော့မှာဘဲ၊ ကျွန်တော့်ကြောင့် မန်ဘာအသစ်တွေကို ၅၀၀၀ ပေးတာသိကုန်ပြီး ကွန်ပလိန်းတွေလုပ်ကုန်ပြီ။
ဆော်ရီးနော် သူကြီး မသိလို့ပါ။
ဘာခုမှ ကြောက်ပါပြီလဲ။ မင်းခုမှ သိသလား.. ယူချင်အုံးဟ မိန်းမ.. အဲဟုတ်ပေါင် “ပွိုင့်”
ဆန္ဒပြကြမယ်ဟေ့ … ငါးထောင်ခုတိုးပေး ..ဒို့ အရေး .. ဒို့ အရေး :grin:
ပိုက်ပိုက်ကို ဖရီးဒေါင်းလွတ် ချနေကြတာကိုး။ပို့စ်တင်တဲ့ သူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အင့် ၂ကျပ်
လစ်ပီ ဖလစ် ဖလစ် …
ကျနော်လဲ အသစ်တစ်ယောက်ပါ ။ အခုလောလောဆယ် ၄၂၉၆ကျပ်ရထားတယ် ။
ဘီယာတစ်ခွက် ၆၀၀ကျပ် ဈေးနဲ့ ဆိုရင် ၊ ၆ခွက်လောက်တော့ သောက်ရတယ်။
(အဲဒီ ဟာတွေအကုန်ဖတ်ပြီးပြီ၊ ပွိုင့်အကြောင်းမပါဘူး၊ ကျွန်တော်ပြောတာ ပွိုင့်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေဘာတွေရှိလားလို့ပါ။ အဟာကြောင့်မေးတာပေ့ါ။)
အားမငယ်ပါနဲ့ ကျနော် နေ့တိုင်းနီးပါးလောက် 2011 ဇန်န၀ါနရီလကတည်းက ပုံတင်စာရေး
(16-6-2012)နေ့မှာ 79289 ရပြီ
အားပေးရင်းတစ်ဆယ်ရတော့ 79299ပေါ့ ဟုတ်လားတော့ မသိဘူး
…ဟေး.. ဆန္ဒပြ မယ် ဟေ့..ဆန္ဒပြ မယ် ဟေး…………..
အလကား ပြောတာပါ၊ တကယ်တော့ဒီ ဆိုက်ကြီး မှာ လာရောက်စုဝေးပီး
လေကန် နေကြတာ မဟုတ်လား……:)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွလာမှုကြောင့် (မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ တစ်မတ်ခေတ်မှ ငါးရာဖြစ်သွားသောခေတ်) သူကြီးလည်း ခေတ်မီစွာဖြင့် ပွိုင့်စနစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ထင်မိပါကြောင်း…. (လာထား တစ်ဆယ်)
သဂျီးက ရာထူးလဲ မတိုးပေးဘူး….
ဒါပေမဲ့ … ရသလောက်လေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပါ့မယ်…..။
ရာထူးဆိုလို့ MG ရဲ့ Rank အကြောင်းသိရင်နဲနဲ ရှင်းပြကြပါလား။
ပိုစ့် အသစ်တင်ရင် လုပ်စားတယ်ထင်မှာစိုးလို့။
ပြီးတော့ တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်ခါမန့်လို့ရလဲ ပါသိချင်ပါတယ်။
ီပိုစ်တင်လို့ ကော်မင်းပေးလို့ ပွိုင့်တွေရတယ်ဆိုတာတွေရယ်
ကိုယ်ရေးသမျှ မန်းသမျှတွေကို ခံစားချက်မပါတဲ့ ကွန်ပြူတာက သူ့ဘာသာသူတွက်ပေးနေမှာပါဘဲ။
နောက်ကျနော်တို့ တစ်တွေစာတွေရေးရင်း ဖတ်ရင်း မန်းရင်းကနေ မိတ်ဆွေတွေတိုးလာတာရှိနိုင်သလို
ဘာလုပ်ရင် ဘာရမလဲလို့ မေးနေတာထက်စာရင်
ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ရလဒ်ကို ခံစားရတာ ကပို အရသာရှိပါတယ်။
ဒီမှာရေးနေသူ အတော်များများရဲ့စိတ်ထဲမှာ ပွိုင့် ဆိုတာကြီးကို စစရာ နောက်စရာ တစ်ခုအဖြစ်ခံစားလို့သာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မေးနေပြောနေကြတာပါ။
အားလုံးရင်ထဲမှာ မျှဝေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးကြပေးကြ နဲ့ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာကတော့ အမှန်တရားပါဘဲ။
ဒီမန်းလေးဂေဇက်က ပေးနေတဲ့ပွိုင့်က ဘ၀ထဲက အစိတ်အပိုင်းသေးသေးလေးတစ်ခုပါဘဲ။
ကျနော်နဲ့ဆရာ ကျော်ရင်မြင့် ဗျူးချိန်မှာ ဒီမန်းလေးဂေဇက်က တစ်သိန်းရတာကို ပျော်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်အပါအ၀င် လူတိုင်းရဲ့ဘ၀မှာ ဒီထက်မကတဲ့ငွေကြေးတွေကို ရှာဖွေဘူး ပိုင်ဆိုင်ဘူးခဲ့ကြမှာ အမှန်ပါဘဲ။
သို့သော် စီးပွားရေးနဲ့မပါတ်သက်သော မိမိကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်မူ့နဲ့ရယူထားသော မိမိဝါသနာကို အရင်းတည်ပြီးရသောငွေကလေးမို့ ၀မ်းသာတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီငွေကြေး ဒီအမှတ်တွေကို သေချာပြန်စီစစ်ကြည့်ရင် ဘ၀အဆုံးထိလောက်အောင်အရေးပါသောကိစ္စမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
အချုပ်ပြောရရင် ဒီပွိုင့်လေးတွေ ကြယ်လေးတွေကို ကျနော်တို့မက်မောပါတယ်။
၀ါသနာကို အရင်းခံပြီးတော့မှ ကိုယ်ဖန်တီးမူ့လေးတွေကို အမှီပြုပြီးရလာလို့ပါဘဲ။
သို့သော် ဒီပွိုင့်တွေက ဘ၀အတွက်ရည်မှန်းချက်အဆုံးလားလို့မေးရင်တော့
ဒီပွိုင့်တွေရအောင်ဖန်တီးယူရတဲ့အချိန်တွေ အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ အချိန် အတတ်ပညာ ကိုသာ
စာရေးတာ ကော်မင်းပေးတာ ဓါတ်ပုံတင်တာတွေ လုပ်နေကြတာဆိုတာကတော့ အသေအချာပါဘဲ။
ဒီကော်မင်းလေးကတော့ ပွိုင့်နဲ့ပါတ်သက်တာလေးကို ကျနော်ခံစားချက်ကို ပြောပြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုစ်ပိုင်ရှင် ကိုစစ်ကဲ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှ သဘောထားပြီးရေးတာမဟုတ်တာကို သိစေချင်ပါတယ်။
လေးပေါက်ပြောတာနားထောင်ပြီး အတည်ပြောပါ့မယ် ..
တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ မန်ဘာဝင်ထားပေမယ့် ဘာမှမရေးပါဘူး
မိုးစက်ဒီဆိုဒ်ကို စဝင်တုန်းက ပွိုင့်က တစ်ထောင်လားမသိ မမှတ်မိတော့ဘူး..
ဘာမှဝင်မပြောပဲ တက်သမျှပို့စ်တိုင်းကိုဖတ်နေခဲ့တာ အကြာကြီးရယ် ..
ဒါကြောင့် ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လိုစာတွေရေးတတ်တယ်
ဒီထဲမှာ သဂျီးကအစ အရမ်းလေးစားစရာကောင်းတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ
(အဟိ .. မိုးစက်ကို ခရက်ဒစ်ပေးနော)
မိုးစက်ကိုယ်တိုင်တော့ စာရေးပျင်းပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ အပျော်သဘောရေးတာပါ
ဖတ်နေရတဲ့စာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လည်း ရေးပါတယ်
တစ်သိန်းလည်းရမှာမှမဟုတ်တာ .. မယုံရင် အခုရထားတဲ့ပွိုင့်တွေအကုန် ဇီးရိုးအထိဆက်တင်ပြန်ချလိုက် အဲ.. ရာထူးတော့မချနဲ့ စိတ်ကူးပေါက်လို့စာရေးရင် ပြင်မရဖြစ်နေမှာစိုးလို့
ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရေ ဒီရွာမှာကြာကြာနေရင် ဒီကလူတွေအကြောင်းသိလာပါလိမ့်မယ်
တောင်ကြီးရောက်တော့ လမ်းဘေးမှာလှော်ရောင်းနေတဲ့ ပူပူနွေးနွေးနေကြာစေ့လှော်။